Monday May 25, 2020 - 11:40:26 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar xooggan oo ciidamo katirsan Xarakada Al Shabaab ay ku qaadeen saldhig kuyaal duleedka degmada Balcad ee gobolka Sh/dhexe.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in weerar hubaysan oo maanta barqadii ciidamada Al Shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidan, weerarka waxaa lagu dilay 2 askari iyadoona xoogagii weerarka qaaday ay horay usii qaateen 2 qori Ak47.
Maleeshiyaadka weerarka lagu dilay ayaa la sheegay in ay taabacsanaayeen nin lagu magacaabo Cusmaan Xaadoole oo horay usoo noqday guddoomiyaha degmada Balcad islamarkaana hadda kamid ah saraakiisha ciidamada gaar ahaan kuwa Isbaaralayda ah.
Dhinaca kale waarka ka imaanaya deegaanka Dhoobleey ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in xalay saqdii dhexe weerar xooggan uu lakulmay saldhig tababar oo ay ku sugnaayeen ciidamo katirsan maamulka 'Somaliland'.
Warar lagu kalsoonyahay ayaa sheegaya in xoogaga weerarka qaaday ee Al Shabaab ay khasaara xooggan gaarsiiyeen ciidamadii lagu tababarayay gudaha saldhigga.